Ugu yaraan sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaUgu yaraan sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho
October 14, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Ugu yaraan sideed qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho . [Sawirka: Twitter]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan sideed qof ayaa ku dhimatay qarax ka dhacay Muqdisho galabta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo katirsan laamaha ammaanka iyo caafimaadka.
Gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa ayaa ku qarxay isgoyska KM-4 oo kuyaala bartamaha magaalada Muqdisho.
Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu u muuqday in lagu bartilmaameedsado huteel kuyaala aaga.
In ka badan 10 qof ayaa ku dhaawacmay weerarka. Waxaana jira baqdin ah in ay kororto tirada dhimashada.
Qaraxa ayaa ahaa kii ugu cuslaa oo ka dhaca Muqdisho intii lagu guda jiray bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay.
Ma jirto koox si deg deg ah u sheegatay masuuliyada qaraxa, balse maleeshiyada Al-Shabaab ayaa qaada weerarada argagaxa leh ee gudaha Muqdisho.
April 22, 2020 Soomaaliya oo kaalinta labaad kaga jirta tirada dhimashada COVID-19 ee Geeska Afrika
Puntland police forces in Garowe detain members of the so-called Puntland Salvage Forum
Garoowe-(Puntland Mirror) Isutaga Imaaraatka Carabta ayaan joojin taageeradii ay siin jireen ciidamada Puntland ee PMPF, sida uu sheegay wasiir. Wasiir katirsan Puntland, oo magaciisa ka gaabsaday, ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in warka sheegaya [...]